Xukuumadda Soomaaliya oo mamnuucdey in qabto xaflado loogu dabaal degayo sanadka milaadiga. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Dhacdoyinka Caalamka Xukuumadda Soomaaliya oo mamnuucdey in qabto xaflado loogu dabaal degayo sanadka milaadiga.
Wasaaradda owqaafta iyo arrimaha diinta Somalia ayaa ka digtay Xuska munaasabadda ciidda kirismaska ee masiixiga iyo xafladaha kale ee loogu dabaal-dago billowga sanad walba, iyadoo ku amartay hay’adaha amniga dowladda Soomaaliya inay ka hortagto haddii la isku dayo in Muqdisho laga abaabulo xaflad noocaas ah.
Agaasimaha wasaarada Owqaafta iyo arrimaha Diinta Somalia Sheekh Maxamed Kheyrow ayaa sheegay in haddii shacabka Soomaaliyeed ay sameeyaan munaasabado loogu dabaal-dagayaan diinta maxiisiga ay wax u dhimayso caqiidadooda, isagoo shacabka ku boorriyay inay ka fogaadaan arrintaas.
“Waxaad la socotaan inay nagu soo wajahan yihiin 25-ka December oo ay masiixiyiintu u dabaal-dagaan Chrisms-ka, maalmahaasna waa caado iyo caqiido gaar u ah masiixiyiinta, dadka muslimka ahna aysan shuqul ku lahayn,” ayuu yiri Sheekh Kheyrow.
Sidoo kale, agaasimaha ayaa ugu baaqay hay’adaha amniga dowladda Somalia, gaar ahaan ciidamada booliiska iyo nabad-sugida inay ka hor-tagaan arrintan, isla markaana ay il-gaar ah ku hayaan abaabullo arrintan la xiriira oo Muqisho ka dhaca.
Waxaa isna isla arrintaan ka hadlay Sh. Nuur Baaruud Gurxan oo culumada Soomaaliyeed ka mid ah, isagoo yiri. “Waxaan u sheegayaa mas’uuliyada dalka iyo ciidamada ammaanka inaan dalkan fasahaad iyo fidno sabab loogu noqon in ciidda masiixiga oo aan muslimiinta khuseyn dabaal-daggeeda lagu qabto dalka. In dad Muslim ah ay yiraahdaan waxaanu xus u dhigaynaa masiixiga sax ma ahan, culumadu arrintaas waa ka digayaan, waana mid diin la’aan lagu mudan karo.”
Ugu dambeyn, Digniinta kasoo baxay maanta Wasaaradda Owqaafta iyo Arrimaha Diinta Somalia ayaa kusoo beegmayaa iyadoo maalmo kooban ay naga xigto 25-ka December oo ay masiixiyiintu xusaan waxay ugu yeereen dhalashadii Nebi Ciise CS oo ay u haystaan arrin aanay diinta Islaamku ogoleyn.
Previous articleDagaal yahanada Daalibaan oo weerarey magaalada Sangins ee gobolka HELMAND.
Next articleSHirka kooxda hiigsiga danaha gaarka ah iyo sida ay wax u qeybsadeen oo lasoo bandhigey.